Fihaonana teo amin’ny Governemanta sy ny Antenimieram-pirenena.
Ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana A/toa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO miatrika ireo Solombavambahoaka teny amin’ny CCI Ivato androany talata 15 desambra 2020.
Araky ny fanontaniana arahana valiny teo amin’ny solombavam-bahoaka sy ny Governementa androany, dia voamarika fa misy azo tsoahina ary mihantefa amin’ny vahoaka ny ezaky ny departemantan’ny Fitsarana na ny ady amin’ny kolikoly na ireo fananganana fotodrafitr’asa toy ny fonja sy tribonaly eraky ny Nosy . Ny Fitsarana atokisan’ny vahoaka ary manakaiky vahoaka koa dia efa anatin’ny ezaka.
Nisy ny fangatahana avy amin’ny Solombavambahoakan’i Nosy be, Imanja, mba hanamboarana Fonja Manarapenitra ka noraisina ho isan’ny asa hotanterahina,ny fonja any Sainte Marie dia hatsangana tsy hoela aorian’ny famahana ny olana ara-teknika.
Ny fananganana Tribonaly dia nangataka koa ireo Solombavambahoaka avy any Amboasary Atsimo, Ambatofinandrahana ka hojerena miaraka amin’ny governementa ny fahafahana manatanteraka ny hetaheta.
Mahakasika ireo « dossiers » halatr’omby narahina faty olona dia hisy ny fangatahina ny tohiny eo anivon’ny fitsarana mahefa nandray izany.
Nahafa po ireo Solombavambahoaka ny fifamindrana asa nisy na teo amin’ny Mpitsara na Mpirakidraharaha na ireo lehiben’ny fonja notanterahina eran’ny Nosy.
Nisy koa ny fangatahana ny hanatanterahina « jugements supplétifs » ary nanambara ny Minisitra fa ezaka maharitra ataon’ireo mpitsara izany na eo aza ny tsy fahampian’isa ka nanemorana ny taona fisotroan-dronono.
Momba ny lositra tao Farafangana dia niara niasa, nidina ifotony ny Mpitsara niaraka tamin’ireo mpitandron’ny filaminana mitady ireo voafonja nanao lositra.Nanentana hatrany ny vahoaka ny Ministra mba hanampy amin’ny fikaroahana.
← Fanaparihahana lalàna eny ifotony
Fandraharana ny fonja : Fiofanana amin’ny fitantanam-bola →